Fampitahana Ereader - Ahoana no hividianana ebook
Fampitahana ireo mpamaky
Ilay malaza mpamaky na boky elektronika araka ny iantsoan'ny olona azy ireo hoe ebook dia fitaovana natao hamakiana. Tsy mitondra lalao izy ireo, na apetraka toy ny amin'ny takelaka. Ny zava-drehetra eto dia mieritreritra mankafy mamaky. Ka raha mpankafy boky ianao dia azo antoka fa ho lasa namanao tsy misaraka io mpamaky ebook anao io.
Raha mieritreritra ny hividy ebook ho anao ianao na hanome azy io ho fanomezana, ity fampitahana ity sy ireo famaritana sy torohevitra homenay anao dia azo antoka fa hanampy anao handray fanapahan-kevitra.
Sony PRS-T3 habe 300dpi No Eny 2Gb / Eny 222 €
Kindle 4 6" 166dpi No Eny 4GbNo 79.99 €
Ireo mpamaky tsara indrindra amin'ny 2017
Ahoana no nilazako taminao raha mitady mpamaky teny ianao eto dia manana safidy tsara indrindra ho hitanao. Ireo no mpamatsy vola tsara indrindra eny an-tsena ankehitriny. Ny voalohany, ny tsara indrindra, ny fanovozan-kevitra ao anatin'ny seha-pihariana ary misy ny sandam-bola tsara indrindra dia ny Amazon Kindle PaperWhite
Mpanjakan'ny mpamaky boky. Azontsika lazaina fa io no be mpampiasa indrindra ankehitriny. Izy io dia mpamaky 6 ″ mikasika mahazatra 300 dpi miaraka amina fahaleovan-tena tena lehibe ary misy efijery manazava hahafahantsika mamaky amin'ny alina izany. Zava-dehibe ny lohahevitra momba ny jiro, satria mahatratra jiro fanamiana avo lenta ny The Paperwhite. Izy io dia nampidirina Wi-Fi, ary fahatsiarovana 4 gig izay, na dia tsy azo itarina aza, dia mihoatra ny ampy. Ho fanampin'izay, Amazon dia manolotra antsika ny rahona tsy voafetra ho an'ireo rakitra voavidy ao amin'ny fivarotany.
Ny Paperwhite no mpandimby ny fandrehitra ifotony ary na dia misy maodely ambony roa avy amin'ny Amazon aza, ny Voyage sy ny Oasis "ny vidiny dia tsy manamarina ny fividianany." Ny Kindle Paperwhite dia manana ny vidiny tsara indrindra eo amin'ny tsenan'ny mpamaky heverina ho ambony. Na ho an'ny fampiasana manokana na ho an'ny fanomezana dia maodely izay fantatsika fa tsy hahomby isika.
Ny lesoka lehibe atrehin'ny Kindle dia ny tsy famakian'izy ireo rakitra amin'ny endrika .epub, izay lazainay fa ny fenitry ny tsena, ny endriny manokana ihany no vakian'izy ireo. Amin'ny fotoana tena marina dia tsy olana izany satria misy programa ampiasaintsika isan'andro toa ny Caliber izay mamadika sy mandefa azy ireo any amin'ny mpamaky azy ho azy.
Raha te hahalala bebe kokoa ianao dia afaka mamaky ny hevitry ny olona efa ho 7.000.
heverina ny mpifaninana lehibe amin'ny Kindle Paperwhite. Izy io dia manana pantallion 6,8 larger lehibe kokoa noho ny mahazatra. Izy io dia mamela hametraka microSD ary mamaky endrika maro kokoa noho ireo jiro. Saingy amin'ny ankapobeny, amin'ny sehatra teknika, heveriko fa mitovy izy ireo, heveriko fa tsy dia miavaka noho ny iray hafa ny iray. Ny tsy fitoviana dia ny marika (Kindle mazàna dia misy fanekena betsaka kokoa) ary ireo sehatra iorenany fa any Espana dia Amazon no be mpampiasa kokoa noho ny an'ny Kobo.
Iray amin'ireo mpamaky farany ambony mahazatra. ny Sony dia manana laza malaza ho fitaovana matanjaka, azo antoka ary mateza Ary raha miresaka amin'ny tompon'ny iray amin'ireo fitaovana ireo ianao dia faly foana izy. Ny PSR-T3 koa dia 6 ″ ary tsy toy ny mpamaky roa teo aloha fa tsy misy jiro. Toa tsy tavela tamin'ny lamaody mpamaky farany i Sony tamin'ny alàlan'ny tsy nidirany tamin'ny ady jiro.
Ho fanampin'ny fiasa tsy misy kilema sy traikefa famakiana tena tsara, io ihany no mpamaky mampiasa penina, penina ahafahantsika mandray naoty. Tena manampy be
Elaela izy no tsara indrindra. Ny Kindle 1, 2, 3 ary izao dia 4, antsoina hoe fototra daholo. Mpamaky tsotra sy mora kokoa izy (€ 79) Miaraka amin'ny efijery 6 ″, nataon'izy ireo nalamina tamin'ny alàlan'ny fanesorana ireo bokotra ara-batana, saingy tsy misy jiro namboarina. Ny fanapaha-kevitra dia 166 dpi fa tsy 300 dpi an'ny zokiny lahy. Andao lazaina fa milalao ligy ambany ianao. Raha mitady mpamaky mora ianao dia iray amin'ireo safidy lehibe azonao atao.
Ny sainam-bolan'ny orinasa Espaniola BQ. Ny BQ Cervantes 3 dia fitaovana tena tsara, miaraka amina endri-javatra mahaliana maro toy ny rindrambaiko Open Source, hahafahan'ny fiarahamonina manova azy, manatsara azy ary mamoaka fampiharana vaovao. Hafa
Ny sainam-pirenena vaovao an'ny marika kanadiana avy any Rakuten. Mety raha tianao ny efijery lehibe. Ny 6,8 ″ dia tsy mamela olona tsy hiraharaha. 8Gb b fitehirizana azo velarana amin'ny microSD. e dia miresaka mpamaky hazavana ihany koa. SYIzy io no fitaovana mety indrindra raha toa ka kely loatra aminao ireo nentim-paharazana 6 ″. Ny Kobo Aura One dia hanisy marika a mialoha sy aorian'ny mpamaky ebook.
Raha olona tia vokatra voafantina ianao, izay karakarainao tsara, dia jereo ny Kindle Voyage na koa ny Kindle Oasis. Ny Voyage dia ny fivoaran'ny Paperwhite. Nihatsara ny fampisehoana, ny fitovian'ny fahazavana. Nihena sy nikitika ny lanjan'ilay fitaovana fa nampiana bokotra fanodinana pejy mora tohina. Ny fiovana amin'ny endrika sy ny pitsopitsony dia karakaraina bebe kokoa. Izy io dia fitaovana misy ny tombony rehetra amin'ny rindrambaiko nomen'i Amazon antsika ary misy endrika am-pitandremana fatratra.
Es ny avo indrindra amin'ny mpamaky 6 ″. Toy ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy dia manana efijery mikasika izy, manazava sns, sns. Ny zava-baovao amin'ity fitaovana ity dia hoe mbola mahia sy maivana kokoa noho ny Voyage izy io, manana endrika ergonomika asymmetrika ary miaraka amin'ny bokotra fihodinana pejy ara-batana fa ny marina dia ireo antsika izay efa zatra azy ireo no malahelo azy ireo matetika rehefa tsy .
Nihatsara ny fahazavana tamin'ny alàlan'ny fanolorana LED 60% bebe kokoa, izay manatsara be ny fitoviana.. Izy io dia manana rafitra famerenana indroa, ny fitaovana sy ny tranga dia voampanga miaraka amin'izay, ka rehefa mivoaka izy io dia manome hery ny mpamaky ilay tranga ary afaka ampiasainay mandritra ny volana maro isika nefa tsy andoavantsika azy intsony.
Raha mitady ereaders mora vidy kokoa ianao dia jereo ny lahatsoratray miaraka amin'ireo mpamaky ebook mora vidy indrindra, izay ahitanao marika sy maodely mora vidy miaraka amina vola be.
Inona no hotadiavina rehefa mividy ereader
Ny mpamaky ebook, na eo aza ny vokatra avo lenta ara-teknolojia, dia manana fiasa kely kokoa hijerena ireo fitaovana hafa toy ny smartphone na tablette.
Avy amin'ny efijery no jerentsika ny habeny. Ny ereades mahazatra dia manana 6 ″, na dia misy aza ny 7 ″, 10 ″, sns fa maningana izy ireo. Ho hitantsika ihany koa raha mikasika izany, raha misy jiro (miresaka jiro, hazavana, ranomainty ny efijery an'ny mpamaky boky raha miresaka momba ny Backlighting izy ireo dia tsy mpamaky boky na raha ilay efijery dia TFT fomban'ny takelaka ary reraka ny masony rehefa mamaky)
Amponga. Tsy toy ny fitaovana hafa fa tsy singa mamaritra. satria ny e-ink na mpamaky ranomainty elektronika dia maharitra herinandro maromaro ka hatramin'ny volana maromaro alohan'ny hamerenana amin'ny laoniny. Na ahoana na ahoana, toy ny amin'ny zava-drehetra, tsara foana ny mijery ary mainka fa ny tsara kokoa.
Sehatra sy tontolo iainana
Tsy misy fisalasalana fa ny eReader dia an'ny vondrom-piarahamonina matanjaka iray izay hamahan'izy ireo ny fisalasalana sy ny olanay ary manana katalaogy lehibe manampy anao izy
Raha mila fampahalalana amin'ny antsipiriany bebe kokoa ianao na manontany anay, dia ampidiro ny anay torolàlana momba ny fividianana ereader sy ebook
Rehefa avy nanombatombana ny safidy rehetra teny an-tsena Androany ny tolo-kevitray ho fitaovana tsara indrindra, izany hoe, ny fitaovana avo lenta avo lenta indrindra dia ny Kindle Paperwhite. Hanome anao traikefa mpampiasa tena tena tsara izy amin'ny maha mpamaky amin'ny vidiny sahaza azy ary amin'ny fahatokiana fa ao aorianao i Amazon sao misy olana. Azo antoka fa noho izany rehetra izany dia MPANJAKA izy
Angamba mbola te hitrandraka bebe kokoa ny tsena ianao ary izany no misy marika maro sy maodely maro, be loatra raha tsy hiteny amin'ny toerana iray. Handao anao ohatra vitsivitsy aho. Raha miresaka marika isika ary na dia maro sy maro tsy fantatra aza, eto Espana dia tsy maintsy jerentsika ny Kindle avy any Amazon, Kobo, NooK, Tagus de la Casa del Libro, ny BQ, Sony, ny Papyre de Grammata ankoatry ny hafa . Tokony hiresaka momba ny mpamaky hafa koa isika izay "marika fotsy" toy ny erefes an'i Carrefour, avy any Alcampo.
Ahoana ny fahitanao azy? Misy mpamaky isan-karazany eny an-tsena sy anton-javatra maro tokony ho raisina. Raha manana fanontaniana ianao dia avelao ny hevitrao fa hiezaka hanampy anao izahay.